अख्तियारको निर्णय नै नक्कली !
काठमाडौं : भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगको नाममा नक्कली निर्णय र चिठी तयार भएको तथ्य फेला परेको छ। गोप्य रूपमा तयार पारिएका त्यस्ता
काठमाडौं । चैत २६ । शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थीत गर्नका निम्ती अन्तरमन्त्री बैठक देखि प्रदेश मन्त्रालयका विकास मन्त्रीहरुसंग
भारतमा सम्वन्धविच्छेदको घटना खासै धेरै हुँदैनन् । तथापि पछिल्ला वर्षहरुको यो दर तीव्ररुपमा बढिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सम्वन्धविच्छेदका लागि दिनहुँ आउने उजूरीहरुमा कतिपय निकै हास्यास्पद
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका लागि साढे आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौँ, चैत २६ गते । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घन्टा सञ्चालन गर्न रन वे मर्मतका लागि साढे आठ करोड रुपैयाँ
काठमाडौँ, चैत २६ गते । हङकङ — एक ३२ वर्षीय नेपाली युवा मचिन्द्र लिम्बू (मादेन) ले हङकङमा बाबुको हत्या गरेका छन् । उनलाई बाबुको हत्या आरोपमा गएराति
व्यक्तिगत लाभमा चहार्ने प्राध्यापकको सूची माग
काठमाडौँ, चैत २६ गते । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राध्यापन गर्नेभन्दा व्यक्तिगत लाभमा चहार्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको सूची माग गर्नुभएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा
व्यवसायी र जनप्रतिनिधीबीच कुटाकुट
काभ्रे : बनेपा नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष र व्यवसायीबीच कुटाकुट भएको छ। कुटाकुट हुँदा हार्डवयर पसलमा क्षति पुगेको छ भने एक स्थानीय घाइते भएका छन्। वडाध्यक्ष सचितानन्द
भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण : प्रधानमन्त्री अोली
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका हुन्। स्वदेश फर्किएसँगै उनले
पश्चिम म्यानमारबाट भागेर छिमेकी देश बांग्लादेश पुगेका रोहिंज्या मुसलमानहरुलाई फिर्ता लिन आफू तयार भएकोमा म्यानमार सरकारले जोड दिएपनि उनीहरुलाई सुरक्षित घरफिर्ती गराउन सक्ने अवस्था अझै नबनेको
एकिकृत राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) ले श्रीनिवासमाथि गोली प्रहारको निन्दा
काठमाडौं । चैत २५ । हिन्दु धर्म गुरु आचार्य श्रीनिवासमाथि गोली प्रहार कसले गर्‍यो भनेर एकीन जानकारी आएको छैन तर भूमिगत समूहको संलग्नता हुनसक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान
जनप्रतिनिधिलाई तारकेश्वरबासीले सोधे टोखा करीडोर त बन्यो साङलेखोला करिडोर कहिले बन्छ ?
रबिन थपलिया । काठमाडौं । चैत २५ । टोखा करीडोर निर्माण भएर धमाधम पिचको काम भइरहंदा खोला वारीपटी रहेको तारकेश्वर नगरपालीका क्षेत्रमा भने करिडोर निर्माणको काम
नेपाल अब सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तीन निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै विकासको हरेक प्रयत्नमा साथ दिने वचन दिए । प्रधानमन्त्री
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको समग्र पक्ष सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै सहमति कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा कूटनीतिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले शनिबार भने, ‘१२ बुँदे
नुवाकोट–तारकेश्वर मैत्री समाज, काठमाडौं गठन
काठमाडौं । चैत २४ । नुवाकोटबाट काठमाडौंको तारकेश्वरमा आएर बसोबास गर्ने नुवाकोट जिल्लाबासीहरु एकजुट भएका छन् । तारकेश्वर १० स्थीत इमेज स्कुलमा आज बृहद भेलाको आयोजना
मन्त्रीकै घरमा लाखौंको चोरी !
काठमाडौं । चैत २३ । काठमाडौंमा चोरीका घटना बढीरहेको अवस्थामा एकजना बहालवाला मन्त्रीकै घरमा चोरी भएको छ । प्रदेश नं ३ का भौतीक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण जानु अगाबै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको हेरफेर
काठमाडौँ, २३ चैत । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अगाब नै बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको स्वागत
काठमाडौँ, २३ चैत । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा स्वागत गरेका छन । काठमाडौंबाट ४५
काठमाडौँ, २३ चैत । श्याम आजकाल बिहान ३ नबज्दै उठ्छ । सामान्यतः ऊ यति छिटो चाँडै ब्युझिने मान्छे होइन । यति चाँडोे उठ्दा पनि उसलाई थकाई भने लाग्दैन
आईपियलमा सन्दीपको प्येइङ इलाभेन सम्भावना
काठमाडौँ, नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछने इन्डियन प्रिमियर लिग आईपियल खेल्ने सम्भावना प्रवल भएको छ । छोटो समयमा नै नेपाली क्रिकेट टिमका चर्चित तथा महत्वपूर्ण खेलाडी
रबिन थपलिया । काठमाडौं । चैत २२ । नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालीकाको दोस्रो गाँउसभा आज सम्पन्न भएको छ । गाँउपालीकाको कार्यालय सेराबगरमा आज सम्पन्न गाँउसभाले हाल सम्म भएको
तारकेश्वरबाट जर्नेलको पिए र एआइजीको श्रीमती भन्दै १ करोड १५ लाख ठगी गर्ने चार पक्राउ
काठमाडौँ, २२ चैत । विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सुरक्षा निकायमा जागिर लगाई दिने र विभिन्न देशमा पठाई दिन्छु भनी ठगी गर्ने ४ जनालाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको छ
सरकारले सिन्डिकेट तोडेपछि एकिकृत राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) ले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ती
काठमाडौ । २२ । चैत्र , एकिकृत राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादीका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनिले यातायातको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले गरेको प्रयत्न जायज भएको बताएका छन । आज
मेयरविरुद्ध बडाअध्यक्ष अनशनमा
सर्लाही – मेयरले मनोमानी ढंगले काम गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बलरा नगरपालिकाका वडाध्यक्षसहित स्थानीय सोमबारदेखि रिले अनशनमा बसेका छन्। मेयर अभय सिंहले आफ्नै भाइको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति
सिटिजन्स बैंकले साधारण सेयर (एफपिओ) निष्कासन गर्ने
काठमाडौं, २१ चैत । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता थप साधारण सेयर (एफपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले संस्थापक र
पाँच उद्योगलाई वातावरण विभागले कारवाही
काठमाडौं चैत २१ । पाँच उद्योगलाई वातावरण विपरीत काम गरेको भन्दै वातावरण विभाग, कुपण्डोलले कारवाही गरेकाे छ। उद्योगले समुदायमा बसाेबास गर्ने स्थानीवासीकाे स्वस्थ्यमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परी
Pages 564 : You are at page 449 of 564